Ezempilo - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
WONKE UMUNTU UFANELE UKUFINYELELEKA EKUNAKEKELWENI KWEZEMPILO OKUYISISEKELO NENKULULEKO FUTHI WENZE IZINQUMO NGEMPILO YABO
Kwa-Prairie State Legal Services, sisiza abantu nemindeni ukuthola nokugcina i-Medicaid ne-Medicare futhi sithole ukufakwa kwezinsizakalo zezempilo abazidingayo.
Sisiza abantu abadala asebekhulile nabantu abakhubazekile ukuthi bathole usizo oludingekayo ukuze bahlale emakhaya abo noma bavikeleke ngokunakekelwa kwesikhathi eside.
Sinikeza abantu abadala asebekhulile nabantu abakhubazekile amandla okuphatha izinqumo zabo zokunakekelwa kwezempilo ngamandla ommeli. Lapho kudingeka, sisiza amalungu omndeni ukuthola ukunakekelwa noma elinye igunya elisemthethweni ukunakekela abathandekayo.
Sisiza abantu abane-HIV + noma abane-AIDS ukuthola ukunakekelwa nezinsizakalo abazidingayo.
Emiphakathini ethile, sisebenza nabahlinzeki bezempilo kwi-Medical-Legal Partnership ukuhlinzeka ngezinsizakalo eziphelele nokubhekana nezidingo zomthetho zeziguli.
Izicelo ze-SSI / SSD zabantu abaphila ne-HIV-AIDS
Ukukhishwa kwamakhaya asebekhulile
Izinsizakalo zokunakekelwa ekhaya
Ukuqashwa kwabantu abadala ukuqinisekisa ukutholakala kwezempilo
Amandla wommeli nezinye iziqondiso kusengaphambili